सपनाको अपहरण ः कुर्सीमा लगानी | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
सपनाको अपहरण ः कुर्सीमा लगानी
२०७१ मंसिर २७, शनिबार ०२:११ गते
निदाउँदा देखिने सपना बिउँझेपछि सकिन्छ । यसको किनबेच असम्भव हो, तर नेपालमा यसको पनि व्यापार हुने गर्दोरहेछ । त्यो पनि एउटाको सपना चोरेर अर्कैले लैजाँदोरहेछ । सपना चोर्ने कामलाई नेपालमा राजनीति भन्दा रहेछन् । नेताहरुले सपना चोर्दा रहेछन् र सत्ताको कुर्सीका लागि लगानी गर्दा रहेछन् । माओवादी कार्यकर्ता खीमा रिजालको संस्मरण समेटिएको किताब ‘अविचलित यात्रा’ पढ्दा हुने अनुभूति यही हो ।
के थियो त खीमाको सपना ? उनी १० वर्षकी हुँदा छिमेकमा गौरी विश्वकर्माको निधन भयो । गौरीकी श्रीमती बाटुलीलाई समाजका सबैले भने, ‘अलच्छिनी’ । पति गुमाएकी नारीप्रति किन यस्तो लाञ्छना ? समाज पुरूषप्रधान छ, दुख्खमा पनि नारीमाथि अत्याचार हुन छाड्दैन । महिलामाथि अत्याचार, गरिबमाथि अत्याचार । समाजको यो शोषण निमिट्यान्न कसरी पार्ने ? सानैदेखि विद्रोही स्वभावकी खीमाको मनमा कुरा खेल्न थाल्छ ।
स्कुल पढ्दा राजनीतिमा रूचि जाग्छ । कलेज पढ्दा संगठनमा सहभागी हुन्छिन् । विसं २०५३ सालदेखि माओवादीमा समाहित हुन्छिन् खीमा । नेपालमा नौलो जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्षले उनले देखेको समानता र समृद्धिको सपना पूरा हुनेमा ढुक्क हुन्छिन्, खीमा । सशस्त्र संघर्षको लगभग सुरूवाती चरणदेखि माओवादीमा जोडिएकी खीमाले देखे भोगेका अनुभूति छ, पुस्तकमा । अनि मुख्य कुरा, के माओवादी संघर्ष उनले देखेको सपना पूरा गर्न सहयोगी भयो त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि त्यसैमा भेटिन्छ ।
माओवादी विद्रोह चरमचुलीमा पुग्यो । शान्ति सम्झौता भयो । संघर्षदेखि संसद् र सरकारसम्मको यात्रा पूरा ग¥यो, खीमा संलग्न भएको पार्टी माओवादीले । खीमाको के छ अवस्था, खीमाको सपनाको के भयो त ? किताबले यिनै विषय पस्केको छ । घरपरिवारको सहमति नहुँदानहुँदै पनि माओवादी अभियानमा होमिएकी हुन्, खीमा । यही युद्धमा उनले जीवनसाथी पाउँछिन् । युद्धकै क्रममा जीवनसाथी गुमाउँछिन् । सानो छँदा असमयमै गैरी बितेका थिए, बाटुलीलाई एक्लै छाडेर । खीमा पनि त्यही अवस्थामा पुगिन् ।
गैरी बित्दा र खीमाको श्रीमान् गुम्दाका समय फरक छ । गैरी बित्दा माओवादी आन्दोलनको कल्पनासम्म थिएन । खीमाका श्रीमान्ले माओवादी छापामार भएरै संघर्षमा जीवन अर्पण गरे, जुन संघर्ष समृद्धि र समानताका लागि थियो । त्यस कारण, श्रीमान् गुमेपछि खीमाले पक्कै बाटुलीको हालत बेहोर्नु परेन । सबैले सोच्ने यही हो । तर, श्रीमान् बितेपछि खीमाको जीवनमा पहाड खस्यो । परिवारले स्वीकार गर्दैन, जुन परिवार माओवादी आन्दोलनमै जोडिएको छ । त्यस्तो परिवारले पनि खीमालाई केसम्म अत्याचार ग¥यो, पुस्तकमा धेरै यसैका बारेमा चर्चा छ ।
सरकारले दिने राहत र सम्पत्तिमाथिको अधिकार रोक्न खोज्छ, खीमालाई परिवारले । परिवारले खोस्न लागेको अधिकार पाउन उनी पार्टी गुहार्छिन्, पार्टीले पनि असहयोग नै गर्छ । अन्तिममा उनी जान्छिन्, अदालतमा । जुन अदालतको अस्तित्व र गरिमालाई जनयुद्धले अस्वीकार गर्न सिकाएको थियो, त्यसैले गर्छ खीमालाई न्याय–निसाफको छिनोफानो । खीमालाई सम्पत्तिको लोभ थिएन, सहिद भएका श्रीमान्का नाममा आउने रकममा आशक्ति थिएन । तर, पाउने अधिकार पनि नपाउँदा उनलाई उदेक लागेर आयो । विडम्बना ! उनले अधिकार खोज्दा उनका नेताले सहयोग गरेनन्, उनको पार्टीले सहयोग गरेन । कस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था ! जनताको अधिकार स्थापित गराउन उनी हिजो युद्धको मोर्चामा सामेल भइन् र त्यही मोर्चामा उनले श्रीमान् पनि गुमाइन् । तर, मोर्चामा गुमाएको श्रीमान्सँगको नातालाई समाजमा मान्यता दिन अदालतकै शरणमा जानुपर्ने अवस्थाले प्रश्न जाग्छ, युद्ध कसका लागि ?
‘यस्ता राँडीहरु उठेर केको चुनाव जित्छन् र ? अरु कसैले अवसर पाउने होइन । पार्टीले उही कामी, दमै, राँडीफुँडीलाई उठाउँछ’, यो भनाइ चुनावमा उठेकी सहिदकी श्रीमतीप्रति लक्षित थियो । यो खीमाप्रति पनि इंगित थियो । कुनै विरोधी पार्टीका मान्छेले भनेका पनि होइनन्, यो माओवादीका मान्छेले नै भनेका हुन् । त्यो पनि सामान्य कार्यकर्ताले भनेका होइनन्, क्षेत्रीय ब्युरो सदस्यका मुखबाट निस्केको रहेछ यो वाक्य । नेताकै मुखबाट यस्ता कुरा निस्केपछि खीमाको मनले भन्छ, ‘सांस्कृतिक परिवर्तन गर्न भनेर हिँडेका मान्छे त यस्ता छन् भने कसरी हुन्छ देशमा परिवर्तन ! हिजो गौरी मर्दा बाटुलीप्रति टिप्पणी गर्ने गाउँलेहरुभन्दा यी नेता के नै फरक भए र !’ पुस्तकको पेज नंं १२० मा खीमा आफ्नो संघर्षको सारसंक्षेप प्रस्तुत गर्छिन् ।
पार्टीको सिद्धान्त र नेताको व्यवहारबीचको विरोधाभासले खीमालाई बनाउनुसम्म दुःखी बनाएको छ । खीमालाई पार्टीले किन दुत्कारेको छ त ? किनकि, खीमा आफ्नो अवरूद्ध पढाइलाई निरन्तरता दिन चाहन्छिन् । पार्टीका नेताहरु यसलाई खीमा पलायन भएको बताउन थाल्छन् । आर्थिक हिनामिनाका कुरा पनि उठाउँछन् । अनि, उनले पाउनु पर्ने सामान्य अधिकारमाथि पनि बन्देज लगाउने र लाञ्छना लगाउने गर्छन् ।
सशस्त्र संघर्ष त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा माओवादी जब सामेल भयो, हामी धेरैले देखेकै कुरा हो– हिजो माओवादीको सत्तोसराप गर्नेहरु पनि मुठ्ठी उठाएर सो पार्टीमा लागे । धेरैले आफ्नो दुनो सोझाए । तर, संघर्षको सुरूवातमा नै माओवादीमा जोडिएकी, युद्धका भीषण र कहालीलाग्दा दिनहरुमा पनि माओवादीलाई नछाडेकी खीमालाई सत्तामा पुग्नेबित्तिकै नेताहरुले अरु होइन, अधिकार पनि दिन कसरी हिच्किचाएका होलान् ? किन उनीहरुले त्यसो गरेका ? किताब पढ्दै गर्दा मनमा खलबली चल्छ । अनि लाग्छ, माओवादीले त युवाको सपनालाई समेटेर आफू कुर्सीमा पुग्ने भ¥याङ मात्रै त बनाएको रहेछ नि !
यस्ता कुराले कमजोर बनाएन, भन्छिन् खीमा । दुःखी मात्रै बनायो, हतोत्साहित पनि भइनँ भन्छिन् उनी । परिवर्तनका नाममा दुनियाँको सपनाको भ¥याङ चढेर सत्ता–स्वार्थमा रमाउनेहरुलाई खीमाले चिनिन् । पुस्तकबाट अरुलाई पनि चिनाउने जमर्को गरिन् । १६८ पेजको पुस्तकमा खीमाका कहीँ ‘सामन्तवादी सोच र कार्यशैली भएका’ बैंकहरुले राखेका गरिब किसानहरुका लालपुर्जा झिकेर सम्बन्धित जग्गाधनीलाई बाँड्दै हिँडेकी भेटिन्छिन् त कहीँ आफूले पाउनु पर्ने लालपुर्जाका लागि अनेक हारगुहार गर्दा पनि साध्य नलागेपछि अदालतको दैलो टेक्छिन् । माओवादी अभियानमा जोडिएको एक योद्धाको अनुभूति क्रान्ति र नेता, सिद्धान्त र व्यवहारका बारेमा प्रस्ट हुन चाहनेका लागि यो पुस्तक उपयोगी छ ।